अर्थ खबर Archives - Page5of9- www.kchhakhabar.com
सुनको भाउ घट्यो, यति छ आज
काठमाडौं। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य १ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज सुन प्रतितोला ५३ हजार ७ सय पुगेको छ । हिजो सुन प्रतितोला ५३ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य घटेपनि चाँदीको मूल्य भने तीनदेखि स्थिर छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला ७ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
धनकुटा जिससको २ करोड ३८ लाख बजेट फ्रिज भए पछी
धनकुटा। आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनकुटाको करिव अढाई करोड बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक बर्षको निकासा खर्चको बिभिन्न शिर्षकको २ करोड ३८ लाख ४९ हजार बजेट फ्रिज भएको हो । जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र संस्कृति प्रवद्र्धन लगायत विभिन्न शिर्षकको रकम फ्रिज भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । फागुनसम्म जिल्ला ...
१ साउन, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा आगामी वर्ष २०१८ को न्यूनतम तलब प्रतिघन्टा ६.६४ डलर निर्धारण भएको छ । योनहाप न्यूज एजेन्सीका अनुसार यो गत वर्षको भन्दा १६.४ प्रतिशत बढी हो । यसबाट दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरु समेत लाभान्वित हुनेछन् ।मजदुर, कम्पनी व्यवस्थापन र सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले न्यूनतम ज्याला ७५२० वन निर्धारण गरेको हो । २०१७ मा कोरियामा क...
तपाईँ ठूलो रकमको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? साउन १ देखि नयाँ नियम लागू हुँदैछ
काठमाडौँ । यदि तपाईँ ठूलो रकमको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने साउन १ गतेदेखि नयाँ नियम लागू हुने भएको छ। आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले साउन १ गतेदेखि १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी नगद गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए। अबदेखि १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्नेछ। यसअघि...
नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ । अघिल्लो दिन तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ आज भने फेरी ५ सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज वजारमा सुनको भाउ प्रतितोला ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । अघिल्लो दिन सुन तोलाको ५४ हजार रुपैयाँमा कारोवार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ कम भएपछि नेपाली बजारमा पनि सस्तिएको महासंघले जनाएको छ । ...
पाइलट रोक्न निगमले बढायो तलब, अब मासिक ६ लाख पाउने
१२ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलटको तलबभत्ता ३ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ । निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरुले आकर्षक तलब भत्ता दिन थालेसँगै निगममाथि पाइलटको सुविधा बढाउन दबाब परेको थियो । निजी क्षेत्रका एयरलाइन्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेपछि निगमबाट पाइलटहरु बाहिरिने क्रम बढेको थियो । निगमले लामो समयदेखि पाइलटको तलब बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँ...
नेपालमा दुई लाख घरेलु श्रमिक, ९० प्रतिशत महिला
काठमाडौं /नेपाली महिला अधिकार आन्दोलन र घरेलु श्रमिकका सवालमा घरेलु श्रमिक मञ्चले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । स्वतन्त्रता अभियान नेपाल र मञ्चको आयोजनमा नेपालमा घरेलु श्रमिकका सवाल र पहिचानमाथि कार्यक्रममा विचारविमर्श भएको थियो । कार्यक्रममा स्वतन्त्रता अभियानकी प्रमुख ऋतु भट्टराईले नेपालमा घरेलु श्रमिकका विविध विषय समेटेको अध्ययनपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । वक्ताहरुले नेपालमा २ लाखभन्दा बढी ...
विदेशी लाइसन नेपाली करण गर्दा ठुलाे मात्रामा अार्थिक चलखेल
६ असार, काठमाडौं । एकान्तकुनास्थित चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा विदेशमा बनाइएका लाइसेन्सको नेपालीकरण प्रक्रियामा अनियमितता र आर्थिक चलखेल भएको पाइएको छ । यसको जानकारी पाएलगत्तै यातायात ब्यवस्था विभागले एकान्तकुनाको कार्यालयबाट हुने नेपालीकरणलाई रोकिएदिएको छ । कर्मचारीकै मिलेमतोमा नेपालीकरण गर्ने नाममा विभिन्न बिकृति भित्रिएपछि विभागले एकान्तकुना कार्यालयको अधिकार खोसेको हो । देशभरमै एकान्तकुनाको ...
पेट्रोलको मुल्य घट्यो: सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने
काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ रु पाँचभन्दा कम नभएकाले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानिएकाले तत्काल भाडा घट्न सक्दैन...
धरान/गत साता सुनचाँदीको भाउ रू. ३ सयले घटेको छ । आइतवार रू. ५४ हजार ८ सयमा किनबेच भएको सुन स्थानीय वस्तु बजारको अन्तिम दिन शुक्रवार घटेर रू. ५४ हजार ५ सयमा किनबेच भएको हो । साताको अन्तिम दिनमा सुन प्रतिऔंस १ हजार २ सय ५६ दशमलव ५० डलरमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर प्रति अमेरिकी डलर १ सय ३ रुपैँया ३९ पैसा रहेको छ । गत साता चाँदीको भाउ भने रू। १५ ले घटेको हो । सोमवार, ...